Elon Musk | RayHaber | raillynews
Shirkad sameeysa gawaarida korontada ee Mareykanka ee Tesla ayaa soo bandhigtay moodeelkeeda cusub ee nooca nooca loo yaqaan Cybertruck pickup todobaadkii hore. Naqshadaynta gaadhiga, muraayadda ayaa la jebiyey intii lagu jiray soo bandhigista ayaa ahayd ajandaha maalinta ugu horreysa. Waxa intaa u dheer oo dhan, [More ...]
Tareen ka dhaqsi badan HYPERLOOP
Tareen ka dhaqsi badan kan loo yaqaan 'Plane': Suurtogal ma tahay in laga safro Istanbul ilaa Ankara daqiiqadaha 20? Ama, tusaale ahaan, 1,5 saacaddiiba tan iyo Istanbul illaa Jarmalka? Ganacsade Genius Elon Musk, aasaasaha Tesla Motors iyo SpaceX [More ...]
Elon Musk Ultra Fast Hyperloop Ride Only 1 Dollar
Elon Musk, maamulaha shirkadda Tesla, SpaceX iyo shirkadda Boring, ayaa ka hadlay mashruuca gaadiidka waalan ee caqabad ku noqon doona dhibaatada taraafikada ee Los Angeles. Musk wuxuu u qalmaa naaneyska 'Iron Man' ee nolosha dhabta ah ilaa dhammaadka. [More ...]
Hyperloop One wuxuu ku bilawday Hindiya
Hyperloop One waxaa laga bilaabay Hindiya. Virgin Group ayaa saxeexday mashruuca Hyperloop si loo yareeyo masaafada 3 saacaddii u dhexeysa Mumbai iyo Pune illaa 25 daqiiqaddii mashruuca Hylonloop ee Elon Musk waxaa hirgelin doona Richard Branson. Virgin [More ...]
3 oo ka socda Elon Musk. Qorshaha muhiimka ah ee garoonka diyaaradaha!
Madaxa fulinta ee shirkadda Elon Musk, ayaa la kulmay madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, waxayna u soo jeediyeen maalgashi garoonka diyaaradaha cusub. Maareeyaha fulinta ee garoonka diyaaradaha ee IGA waxaa soo saaray Diarmuid O'Connell, Madaxweyne kuxigeenka Musk ee hormarinta ganacsiga [More ...]
In Turkey "Project hyperloop" maxaa diidaya?
In kasta oo adduunku sii wado la halganka khilaafaadka iyo jahwareerka, qaar ka mid ah magacyada himilada ayaa wali ka sii shaqeeya mashruucyada adduunka wax ka beddeli doona oo aadanaha u keeni doona mustaqbal wanaagsan. Mid ka mid ah iyaga ka mid ah waa bulsho leh booqasho uu ku Turkey toddobaadkii la soo dhaafay [More ...]
Hyperloop One wuxuu gaadhay xawaaraha sare
Elon Musk waa mid ka mid ah shirkadaha ay leedahay shirkadda fadhigeedu yahay magaalada Los Angeles ee Hyperloop'un ee soo saarta mashruuc tareen xawaare sare leh, oo xadka kale laga boodey. Hyperloop Mid wuxuu gaadhay xawaaraha ugu sareeya. a [More ...]
82 Kuuriya (Koonfurta)
Kuuriyada Koonfureed waxay bilowday shaqo tareen si loo xawilo
Kuuriyada Woqooyi waxay biloowday shaqo tareenka xawaaraha dheereeya: waxaa lagu dhawaaqay in shaqada ay ka socoto tareen xawaare sare ku socda South Korea. Teknolojiyadda sare ee tareenka xawaaraha sare ku socda [More ...]
Sidee u shaqeeyaa Hyperloop Xataa xataa diyaarad
Sida Degdegga ah Hyperloop u shaqeeyo xitaa marka laga yimaado diyaaradda: Ganacsade Crazy Elon Musk mashruuca tareenka 'Hyperloop', oo dhaaftay xawaaraha 1000 km saacaddii, wuxuu ku sii socdaa tunelada hawadu ka socoto. Innovation Week for Turkey [More ...]
Diyaaradda koowaad ee xawaaraha tareenka Dubaare
Tareenka ugu horreeya ee xawaaraha diyaaradda Dubaiye: Waxa loo bilaabay sidii tareen gaadha xawaaraha ilaa kun kiiloomitir wuxuuna ballanqaaday inuu yareyn doono gaadiidka isku xidha illaa heerka daqiiqadaha 'Hyperloop' markii ugu horreysay ee u safri doona Dubai iyo Abu Dhabi. [More ...]
Ka cabso hawada
Qaado tareenka ka baqaya diyaaradda: Hyperloop, oo loo maleynayo inuu ka dhakhso badan yahay diyaaradda, ayaa lagu dhawaaqi doonaa 8 Noofembar. [More ...]
Gaadiidka Gaadiidka Hal Gaadiidka
Gaadiidka leh Hyperloop Mid ayaa boodi doona: Mid ka mid ah hababka ugu aaminka badan ee gaadiidka, tareenadu waxay mari karaan isbedelo ba'an sanadaha soo socda. Sida la ogsoon yahay, horumarka loogu talagalay tareennada xawaaraha sare ku socda sannadihii la soo dhaafay, shaqada degdegga ah ee injineerada [More ...]
Hyperloop wuxuu ku qaadan doonaa gaariga iyo sidoo kale nin
Hyperloop wuxuu ku qaadi doonaa dadka iyo sidoo kale gaariga: mashruuca bilyaneerka u dhashay Mareykanka ee Elon Musk ee El Hyperloop, kaasoo uu ku macneeyay inuu yahay qaabkii shanaad ee gaadiidka ardından ka dib markii hawada, badda, dhulka iyo jidadka tareenka, ay bilaabeen baaritaan. Ganacsade bilyaneer Mareykan ah [More ...]